अब बन्ने मेयर / उपमेयरसंग माडीबासीका माग | Hamro Madi
अब बन्ने मेयर / उपमेयरसंग माडीबासीका माग
प्रकाशित मिति: १६ बैशाख, २०७४
सुदीप निउरे, बैशाख १६ , माडी ।
स्थानिय तहको निर्बाचन नजिकिंदै गर्दा चितवनको माडीमा अहिले दलहरु घर दैलोमा ब्यस्त छन् । सबै राजनितीक दलका नेता कार्यकर्ता र निर्वाचनमा उठेका उमेद्धारलाई अहिले भ्याई नभ्याई छ । बिभिन्न महत्वकांक्षी योजना, बिकास निर्माणबारे पार्टीगत धारणा लिएर उनिहरु मतदातासमक्ष पुगिरहेका छन । माडी नगरपालिकामा अहिले २१ हजार ६ सय ७२ जना मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तिनै मतदाताहरुको घरदैलोमा भोट माग्नेको लर्काे दैनिक चलिरहेको छ । माडीबासीको घर-घरमा बिभिन्न दलका उमेद्धार जाने र आफुलाई मतदान गरि बिजयी बनाउन आग्रह गरिरहेका छन् । स्थानिय माडीबासीको मत आफ्नो पक्षमा पार्ने रस्साकसी यतिबेला दलहरु बिच चलीरहेको छ । माडीमा नेपाली कांग्रेश,नेकपा एमाले,माओबादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आ-आफ्नै दलले जित्ने दाबी गरिरहे छन् ।
अबको जित कुन दलले हात पार्ला भन्ने बहस गरिरहंदा यस अघिका चुनावी नतिजा यस्तो छ । साबिकको अयोध्यापुरी , कल्याणपुर, बघौडा र गर्दी गाबिस मिलाएर अहिलेको माडी नगरपालिका निर्माण गरिएको हो । यसअघि २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अयोध्यापुर ,कल्याणपुर र बघौडा गाविसमा नेकपा एमाले विजयी भएको थियो भने गर्दी गा.बि.स.मा तत्कालिन जनमोर्चाले जित हासील गरेको थियो । क्षेत्र न ५ अन्र्तगत पर्ने माडीमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा तत्कालिन जनमोर्चाका अमिक शेरचन र संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट विक्रम पाण्डे बिजयी बनेका हुन् ।
माडी नगरपालिकाको आगामी मेयर दाबी गर्दै नेपाली काग्रेसबाट खेम महत्तो, नेकपा एमालेबाट नारदमणी पौडेल , माओबादी केन्द्रबाट ठाकुर ढकाल , राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मदन पौडेल , नेकपा माओबादी क्रान्तिकारीबाट सिपि सुबेदी र नयाँ शक्ति बाट रमाकान्त सापकोटा खडा भएका छन् । यसै गरी माडी नगरपालीकाको उपमेयरमा नेपाली काग्रेसबाट शिबमाया भट्टराई , नेकपा एमालेबाट ताराकाजी महत्तो , माओबादी केन्द्रबाट सरिता महत्तो , राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट भिमकुमारी महत्तो(मल्ल), नेकपा माओबादी क्रान्तिकारीबाट साबित्री पौडेल र नयाँ शक्ति बाट सन्त्रसा महतो उठेका छन् । नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजबादी पार्टी बिच माडिमा सयुक्त प्यानलमा उम्मेद्बारी तय भएको हो ।
माडीका नौ वटै वडामा सबै दलबाट वडाध्यक्ष र सदस्यहरु चयन गर्ने क्रमसंगै चुनावी प्रचारप्रसार पनि अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा चलिरहेको छ । तर अब बन्ने माडी नगरपालीकाको मेयर र उपमेयरको कांधमा भने समस्यै समस्याका पोकाहरु थोपरिंदै छन् । माडीको लागि अब बन्ने मेयर उपमेयर वडाध्यक्ष लगायत सदस्यहरुले धेरै च’नौतीहरुको सामना गन’ पर्ने देखिन्छ ।निर्बाचनको रौनक चलिरहंदा माडीबासीहरु सामाजिक संजालहरुमा पनि निक्कै सक्रिय देखिएका छन् । सामाजिक संजालमा आरोप प्रत्यारोप संगसंगै सम’न्नत माडी बनाउन अब बन्ने नेतृत्वले के के गर्न आबश्यक छ भन्ने बहस गरेको भेटियो । फेसबुकमा भेटिएको माडी बहस जस्ताको तस्तै ।
काठमाडौं बासी भरतपुरको उम्मेदवार, भरतपुर बासी माडीको उम्मेदवार बनेपछी स्थनिय नेता कहाँं जाने?? हरिद्वार ???
त्यसैले पर्यटक नेतालाई भन्दा जो ढुकुरबारी र बाँदरझुलाका सुकुम्बासी वा इमिलिया र सिमराका बढीपीडित वा बन्कट्टा र धांधरका जङली बन्यजन्तु पीडितहरु सँगै रही उनिहरुको समस्याहरुको दिर्घकालिन समाधान गर्नसक्ने स्थनिय लाई उम्मेदवार बनाइयोस। पुरानालाई सम्मान गरौ कामगर्ने हिम्मत भएका युवा लाई उम्मेदवार बनाइ मतदान गरौं।
Shiva Raj Timilsina‎
कसैले घर कहा हो भनेर सोध्दा चितवन भन्छु, उनिहरुले आहा ! चितवन भन्छन ,मलाई चै रुन मन लाग्छ । घरीघरी त कर्णालीका बासी भन्दा नि दुखी संझीन्छु !नेता ज्यु हरुमा नमस्कार, म तपाईकै मतदाता ! पछि के हुन्छ कुन्नि तर चुनाव अघि हाम्रो समस्या पक्कै सुन्नु हुनेछ, भनेर सानो अनुरोध गर्दैछु,हामी सँग समस्या कयौ छन् तर मुख्य समस्या निकुञ्जका जनवारहरुको अनि विनासकारी बाढी ! बाढीवाट बचेको बाली पनि बर्षेनी जंगली जनवारले सखाप पारेको छ, घरघरमा आएर मान्छे मारीएका छन्! अहिले सम्म तपाईहरुले के के प्रयास गर्नु भो सबै हाम्लाई थाहा छ किनकी तपाईहरु हाम्रै दाजुभाई हुनुहुन्छ । भोलिका एजेण्डा के-के ल्याउनु हुन्छ ति पनि पक्कै हाम्ले देख्ने छौ । त्यसै अनुसार हिजो र भोलीलाई आधार मानेर मतदान गरौला !
माडीको मुल मुद्दा , सबैभन्दा पहिले निकुञ्जको नियमवाली संशोधन गर्ने र जनावर नियन्त्रण सँगै रिउखोलामा ड्याक निर्माण हो । किनकि बगई देखि बनकट्टा सम्म कति हेक्टर जग्गा नदिले कटान गरेको छ? बर्सेनि कति हेक्टर जग्गा जनावरको कारण बाझो हुने गरेको छ? साथै लगाएको बाली कति नस्ट गरेको छ जनावरले? अप्रत्यक्ष रूपमा यसको लेखाजोखा नगरेपनी माडीका किसानको कति नोक्सान छ बर्सेनि? र मुलतः माडी बाट बसाइँसराइ गरि अन्यत्र जानू मुख्य कारण पनि जंगली जनावरको आक्रमण र नदिनालाको कारण जग्गा कटान हो ।त्यसपछि सडक,बिजुली,सिँचाइ,स्वास्थ्य,शिक्षा,पर्यटनबिकास,धार्मिक क्षेत्रको बिकास इत्यादि हुन । माडी बिकासको एजेन्डा, यसको स्पष्ट धारणा र बिकास गर्ने एजेन्डा जस्ले ल्याउँछ उही लाई माडी नगरपालिकाको मेयरमा चयन गर्नुपर्छ अब हामी भाषण र चिल्ला कुरामा नफसौँ।
माडिको पहिलो आवस्यकता रिउको तिरबाट शिकारीपुर देखी बगै सम्म ड्याम बाध्नु पर्छ ! त्यसो गर्दा त्यही ड्याम माथी बाट मोटर बाटो होस । ड्यामको कारण नदी नियन्त्रण होस अनि जङली जनवार गाउ पस्न बन्द होस । अर्को मग्गुइ खोला , परुइ खोला र घागर खोलामा बस्ती भन्दा कारीव १ किमी माथी स्तरिय ड्याम बाधेर बर्खाको पानी सन्चित गर्न सकियोस ता कि लघु जलबिद्दुत योजना तथा बर्ष भरि सिन्चाइ गर्न सकियोस ।
जङ्ल माडी बिकासको बाधक नबनोस ! नितिगत सुधार गरेर त्यस्लाई जनहितमा प्रयोग गर्न सकियोस । बाटोघाटो पुल पुलेसा गाउ गाउमा बिद्दुतिकरण , यौटा राम्रो हस्पिटल (कम्तिमा सर्पले टोक्दा भरतपुर जान नपरोस्) । युवा लाई रोजगार सृजना गर्न त्यस्तै कार्यक्रम आदी !
सबै उम्मेदवार स्थानीय नै भएको हुँदा स्थानीय समस्या र मुद्दाहरुमा अवश्य जानकार नै छन्। तर पनि केहि कुराहरु मतदाताबाट सचेत गराएकै राम्रो। पिच गरिएको माडीको बाटोको दुर्दसा सबैले देखेकै छौं। यस्तो ठगी धन्दा कसैबाट नहोस् भन्नेतर्फ सचेत रहँदै उक्त बाटो चौडा गरी तुरुन्तै स्तरोन्नतिको पहल गर्ने ।
– राष्ट्रीय निकुन्जभित्रको बाटो कुनै पनि पनि बहानामा त्यसै नराखी पक्की बनाउनपट्टी पहल गर्ने,
– निकुन्जका जनावरहरुबाट बर्षेनी हुने मानवीय र भौतिक क्षति न्युनिकरणको प्रयास गरी भएको क्षतिमा उचित क्षतिपुर्तिको ब्यवस्था गरी स्थानीय र निकुन्जबिच राम्रो सम्बन्ध कायम गराउन पहल गर्ने,
– अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएतका समस्या र असुबिधा माडीमा यथावत छन्। यसतर्फ बिशेष ध्यान दिइ सदरमुकाम र राजधानीको निर्भरता हटाउने किसिमले कार्यसंपादन गर्न सक्ने,यसो हुन सकेमा माडीबाट सदरमुकामतर्फ बढ्दै गरेको बसाइसराई स्वत: कम हुनेछ।
– माडीभरि समेट्नेगरी चक्रपथ निर्माण र लिंकरोडहरुको लागि पहल गर्न सक्ने,
– माडी एक पर्यटकिय संभावना बोकेको क्षेत्र पनि भएकोले यसको पर्यटन बिस्तार र प्रचार गरी स्थानीय जनताहरु लावान्वित हुनसक्नेगरी कार्ययोजना ल्याउन सक्ने,
– ठोरी नाका संचालन गरी ब्यापारको लागि नारायणगढ भरतपुरको निर्भरता हटाउन सक्ने,
– माडीलाई आधुनिक शहरमा रुपान्तरित गर्नका लागि योजना तर्जुमा गर्न सक्ने,
-स्थानीय ठाडा खोलाहरुको कारण बर्षेनी हुने अपार जनधनको क्षति रोक्नको लागि अत्याधुनिक तटबन्धको ब्यवस्था र बाटोमा पर्ने खोलाहरुमा भरपर्दा पक्कि पुलहरुको निर्माण गर्नु एकदमै आवश्यक छ। नगरपालिका भैसक्दा पनि ति ठाडा खोलाहरुको कारण बर्षायाममा बाटो अवरुद्द भएर सदरमुकाम र देशका अन्य भागसँगै संपर्क बिच्छेद हुनु दुख र पिडाको कुरा हो। यसतर्फ पहिलो प्रार्थमिकतामा काम गर्न सक्ने;
– माछापालन र कृषिको प्रसस्तै संभावना भएको माडी क्षेत्रमा आधुनिक कृषि प्रणालीको सुरुवात गराउन पहल गर्न सक्ने।
यस्तै यस्तै सवालहरु र समस्याहरु नै सायद माडीबासी धेरैका साझा सवाल हुन्। यि बाहेक अन्य धेरै कामहरुले प्रतिनिधिहरुलाई करीरहेको हुनसक्छ। यि साझा मुद्दाहरुमा योजना सहितका प्रतिबद्दता लिएर साँच्चै काम गरेर देखाउँछु भन्ने जो कसैले जितोस् तर माडीले जितेको आभाष रहोस्।
माओबादी केन्द्र माडीको घरदैलो अभियान तीव्र